Beekan Interview – Beekan Guluma Erena
Beekan Interview HUMNA BARREESSUU KEESSA JIRUUN GALAANA GUDDAA SOCHOOSUU DANDEENYA!!
Ittifufees sirni bulchiinsa Hayile Sillaasee aangoo gadhiisuus barsiifata badaafi hammaataa kana lafa qabsiisee ilaalcha hawaasa impaayeratti keessa jiraatu immoo daba seenaan bokoksee Hantuuta Jawwee liqimsitee eegee baasuuf wixifattu godhee waan darbeef Oromummaa laaffisuu qofa utuu hin taane, lammiin Oromoo hedduun eenyummaa isaa akka wallaaluufi ogbarruufi duudhalee isaallee akka dagatuuf gumaacha hammeenyaa kana gumaacheera. Kun immoo lakkoofsi ogbarruu Oromoo maaliif baay’ina dhabee? dhalootni Oromoo hammana baay’atan maaliif fedhii og barruu Oromoo dubbisuu dhabaniifi afoolonni Oromoo yeroo ammaa maaliif akkuma afoola sabaafi sablammilee biroo haalaan baay’atanii maxxanuufi raabsamuu dadhaban kan jedhuu waan baay’ee nama yaachisudha. Keessumattuu dhaloota Qubee amma ka’aa jiranillee wayya malee Oromoon sum’ii jaraatiin laaqame hedduunsaa kitaaba Oromoofi aartii Oromoo baay’ee hin leellisan. Egaa dubbiin akkanaa Oromoorratti fe’amaa turte. Bara mootummaa Dargiis yoo ta’e afaan ofii barachuufii afaan ofiin barachun carraansaa hinturre. Mootummaa dargiis yoo ta’e, qaroowwan Oromoo hedduu dararsuufi dhabamasiisuu malee homaa hu hintolle. Gootota akka addunyaatti beekaman bara sana keessa dhabneerra.
Harvard University Email: beekanguluma@gmail.com